डा. विमल कोइराला | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय डा. विमल कोइराला
सरकारका मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला २०१२ सालमा भोजपुर जिल्लाको पोखरेमा जन्मिएका हुन् । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको डयुक विश्वविद्यालयबाट स्नातक र जर्मनीको डोर्टमुण्ट विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । सरकारी सेवामा करीब २७ वर्ष बिताएका कोइरालाले उद्योग मन्त्रालयमा सहसचिव, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा विशेष सचिव हुँदै अर्थ मन्त्रालयको सचिव भएर ३ वर्षकाम गरेका थिए । मुख्य सचिवसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेर उनले २०६२ सालदेखि सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका हुन् । त्यसपछि उनले विश्व बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय वाशिङटनको सल्लाहकार र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम काठमाडौंको वरिष्ठ सल्लाहकारको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका छन् । साथै, उनीसँग एशियाली विकास बैङ्क प्रतिष्ठान टोकियोको आगन्तुक प्राध्यापकको अनुभव पनि छ । हाल उनी यूएनसीडीएफमा विकास परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत छन् ।
ओझेलमा पार्न खोजिएको निजीक्षेत्र
उद्योग, व्यापार र प्रविधिको शक्तिलाई सम्मान गरी आर्थिक वृद्धिका खातिर कष्टपूर्ण पुन: संरचना गरी निजीक्षेत्र वा व्यक्तिगत उद्यमशीलतालाई प्रश्रय दिने विकासोन्मुख र विकसित मुलुकहरूले नै फड्को मार्न सकेका छन् । साविकमा सम्पत्तिको व्यापक पुनर्वितरण गरी सरकारी नियन्त्रणबाट विकास थाल्ने मुलुकहरू (चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, रुस) पनि थाकेर व्यक्तिगत उद्यमशीलता र स्वदेशी(विदेशी निजी लगानीलाई नै प्राथमिकता दिएकाले विकास अभियानमा उम्दा नतीजा दिन सफल भइरहेका छन् । हाम्रो मुलुकमा भने यतिका वर्षबितिसक्दा पनि निजीक्षेत्रका विषयमा साझा अवधारणा बन्न सकेको छैन । निजीक्षेत्रको नेतृत्व स्वीकार गर्नासाथ समाजवादी वा क्रान्तिकारी नहोइने हो कि भन्ने पिरलो छ । अझै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई मान्यता दिन आनाकानी गर्नुमा परम्परागत राजनीतिक प्रशिक्षणको दोष देखिन्छ । सहकारी भन्नेबित्तिकै खुशी हुने र निजीक्षेत्र भन्दा नाक खुम्च्याउनेहरूको बलियो प्रभावका कारण नै अर्थ राजनीतिक विकासमा अन्योल देखिएको छ । सहकारी पूँजीवादी समाजमा समताका निम्ति प्रयोग हुने अस्त्र हो र यसको विकास निजीक्षेत्र सँगसँगै हुने गर्छ ।
निजी उद्यमशीलताले नै उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय विकल्प दिने हुँदा निजी लागानीलाई उत्प्रेरित गरिँदै आएको हो । सरकारी लगानीले उद्योग-वाणिज्य क्षेत्रका अनगिन्ति क्षेत्र समेट्न सक्दैन । हाम्रै मुलुकलाई हेर्ने हो भने पनि यतिका उद्योगधन्दा, बैङ्क, वायुसेवा, स्कूल, अस्पताल, यातायात के सरकारी लगानीबाट मात्र सम्भव छ ? निजीक्षेत्र चाहिने तर निजीक्षेत्रबारे खुकुलो नीति ल्याउँदा राजनीतिक रुपमा अप्ठयारो पर्ने मानसिकताका कारण खुलेर निजीक्षेत्रको विकासका विषयमा साझा सहमति बन्न नसकेको हो ।
सरकारले वर्षेनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकेको हुन्छ । बजेटमै सरकारले विकास खर्चको उपल्लो सीमा तोक्ने गर्छ । सरकारी लगानीलाई मात्र गणना गर्ने हो भने लक्ष्यको एक तिहाइ उपलब्धि पनि सम्भव हुँदैन । एक तिहाइ उपलब्धिका निम्ति गरिने खर्च सुनाउन निकै ठूलो तामझाम गरिन्छ तर दुई तिहाइ लगानी गर्ने निजीक्षेत्रका विषयमा ‘चुँ’सम्म गरिँदैन । यसले निजीक्षेत्रको सरकारप्रति विश्वास घटाएको छ । अत्यावश्यक क्षेत्रहरूमा निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न सुरक्षा, प्रतिफलको प्रत्याभूति र नीतिगत समस्याको निराकरण नगरी अहिलेकै परिस्थितिमा ठूलो आयतनमा निजी लागानी आउँछ भन्ने सोच्नु भूल हुनेछ ।
मुलुकको आयस्ताको आकार त्यसै बढ्ने होइन । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको क्यापिटल आउटपुट अनुपातले १ रुपैयाँ आयस्ता बढाउन झण्डै ५ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । आहिलेको हिसाबमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु भनेको कुल आम्दानीमा ६५-६६ अर्ब थप गर्नु हो । ६५-६६ अर्ब थप गर्न ३ सय २५ देखि ३ सय ३० अर्ब लागनी गर्नुपर्ने हुन्छ । के निजीक्षेत्रलाई एक्ल्याएर १ सय ४० अर्बको सरकारी लगानीले त्यो वृद्धि सम्भव होला ? स्वदेशी पूँजीले नपुगेका बेला विदेशी पूँजी प्रवेश गराउन पनि लगानी नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले आन्तरिक लगानीकर्ताको अवस्था नहेरी लगानी गर्न रुचाउँदैनन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले निजीक्षेत्रको मानमर्दन गर्ने नीति अख्तियार गर्यौं भने गरीबीको फन्दाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सक्दैनौं र हामी पछि परिरहन्छौं ।
निजीक्षेत्र स्वभावैले नाफामुखी हुन्छ । यथोचित नाफा र सुरक्षा दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । नियमन व्यवस्थालाई दह्रो बनाई निजीक्षेत्रले गर्नसक्ने गलत फाइदालाई सरकारले निगरानी राख्नुपर्छ । तर, बाटोबाट चोर पनि हिँड्छ भनेर बाटै बन्द गर्नु हुँदैन । अहिले निजीक्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण बाटो नै बन्द गर्ने खालको भयो । संशयमाथि संशय थपेर अपत्यार बढाउँदै लाने काम भइरहेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण शीघ्र सार्वजनिक गरोस् ।
‘डुइङ बिजनेश प्रतिवेदन-२०११’ अनुसार गएको ४ वर्षमा निजीक्षेत्रको सुधारमा सिन्को पनि नभाँच्ने दक्षिण एशियाका मुलुकमा नेपालमात्र परेको छ । यस्तो नाजुक आवस्था कुत उठाएर खाने राजनीति र कर्मचारी प्रशासनले गर्दा सृजना भएको हो भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सुधारको दिशामा उल्लेख्य काम नथाल्नु उदेकको विषय भएको छ । अब अलमलिने बेला छैन, निजीक्षेत्रको विकासले नै गरीबी घटाउन, रोजगारी सृजना गर्न र मुलुकको आर्थिक अवस्था उठाउन मद्दत गर्छ । ‘वाद’को निकास ननिस्कने झन्झटमा नपरी प्रमाणित भइसकेको निजीक्षेत्रको महत्वलाई बुझ्न अबेर नगरौं ।
विश्व आर्थिक इतिहास हेर्ने हो भने निजीक्षेत्रका परिपूरक संस्थाहरू समयसमयमा देखिएका होलान् । सहकारी संस्थाले पनि बजार प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा टेकोको काम गर्लान् । प्रमाणित सत्य के हो भने निजीक्षेत्रको विकल्प दह्रो र उन्नत निजीक्षेत्र नै हो, सरकार पनि असल विकल्प होइन । सार्वजनिक क्षेत्रको अत्युत्तम परिचालन गर्न र साझा राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त गर्न पनि दह्रो निजीक्षेत्र नभई हुँदैन । शासन व्यवस्था असल ढङ्गले सञ्चालन गर्न पनि निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । सामाजिक आर्थिक विकासको यो अभिन्न अङ्गको विकल्प खोजेजस्तो गरी सौतेनी व्यवहार गर्नु राज्यको निम्ति शोभनीय हुँदैन ।
सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले निजीक्षेत्रका सङ्गठनहरूमा भाषण गर्नुपर्दा निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनका कुरा गर्ने र कार्यकर्तालाई कुरा गर्दा राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्नाले गहिरो शङ्का उब्जिएको छ । शङ्का निवारण गर्न पनि अहिले राज्यको भूमिकाको पुनर्परिभाषा गर्नुपर्यो । राष्ट्रियता निर्माणमा दह्रो साझेदार हुन सक्ने निजीक्षेत्रलाई भेटेका बेला गुलिया शब्दले नभूलाऔं बरु अर्थतन्त्रको विकासमा सुरक्षित ठाउँ दिऔं ।
निजीक्षेत्रको विकासमा राज्यको सशक्त भूमिका हुन्छ । राज्यले नै निजीक्षेत्र अनुकूल र लगानीमैत्री नीति बनाउने हो । लगानीको सुरक्षा र राम्रो व्यापारको गुञ्जायस देख्नासाथ निजीक्षेत्र लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन् । राज्य बन्धनकारी र नियन्त्रक नभई सहजकर्ता र प्रवर्द्धक हुनुपर्छ । साविकदेखि नै नियन्त्रण र कसिकसाउमा लागेको राज्यको निम्ति यो नयाँ भूमिका कठिन हुन्छ । तर, चीन, भियतनाम र रुसजस्ता मुलुकहरूको समेत पुनरअभिमुखीकरण भइसकेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा पनि त्यही दृष्टिकोणका साथ काम गर्न अप्ठयारो नपर्नु पर्ने हो । सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी शक्ति होइन । यिनलाई परिपूरक बनाउन भने योजनाबद्ध अभ्यास नै चाहिन्छ ।